"Douwen Fiction" App ကို Bytedance မိတ်ဆက် - Pandaily
“Douwen Fiction” App ကို Bytedance မိတ်ဆက်
Jan 05, 2022, 17:11ညနေ 2022/01/07 23:02:06 Pandaily
နည်းပညာ ဂြိုဟ်ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် Bytedance သည် လခ ပေးသော ဝတ္ထု ဈေးကွက် ကိုစမ်းသပ် နေကြောင်း သိရှိ ခဲ့ရသည်။ မကြာသေးမီက ကုမ္ပဏီသည် Douwen Fiction အက် ပလီကေးရှင်း ကိုစတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်း တွင်ပိုမို ကြီးမားသော စီးပွားရေး မြှင့်တင် မှု၏ အသေးစား ဗားရှင်း ဖြစ်သည်။
“Douwen Novels” မွာ အရည္အေသြး ျမင့္ ၿပီး ေၾကာ္ျငာ မပါတဲ့ ၀တၳဳ ေတြ ပါ၀င္ Feature ပိုင်း မှာတော့ အက်ပ် က font size, background color, page turn စတဲ့ စိတ်ကြိုက် settings မျိုးစုံ ကို ထောက်ပံ့ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား စာဖတ် ခြင်း application များနှင့် မတူဘဲ Douwen ၏ ဝတ္ထု များကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်မျိုး ခွဲခြား ထားပြီး အသုံးပြု သူများအတွက် သီးသန့် စာဖတ် ခြင်း နေရာ ဖန်တီး ရန်ကြိုးစားသည်။
လက်ရှိတွင် Douwen ၏ ဝတ္ထု များသည် စိတ်ကူးယဉ် ၊ သမိုင်း၊ နတ်သမီး ပုံပြ င်၊ မြို့ပြ ဘဝ နှင့်အခြား အကြောင်းအရာ များအပါအ ၀ င် အွန်လိုင်း ဝတ္ထု များကို အဓိကထား ကျင်းပ သည်။
အက် ပလီကေးရှင်း သည် paywall ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ စာဖတ် သူများသည် ဝတ္ထု ၏ နောက် အခန်း ကိုဖတ် ရန် “စာအုပ် ဒင်္ဂါး” အချို့ကို ပေးရ သည်။ ထို့အပြင် အက် ပလီကေးရှင်း သည် “လစဉ် ဖတ်ရှု ခြင်း” subscription feature ကိုထောက်ပံ့ပေး ပြီး သုံးစွဲသူများ သည်တစ် လအတွင်း စာအုပ် များ နိုင် သမျှ များများ ဖတ် နိုင်သည်။
ဤ အက် ပလီကေးရှင်း သည် Bytedance မှ လခ ပေးသော ဝတ္ထု ဈေးကွက် သို့ နောက်ဆုံး ပြောင်းရွှေ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ကုမ္ပဏီသည် Douwen Novels နှင့် Qamdo Novels အပါအ ၀ င် စာဖတ် ခြင်း ထုတ်ကုန် ၆ ခုနှင့် Cuiguo Novels နှင့် Bingke Novels အပါအ ၀ င် လခ ပေးသော ဝတ္ထု ထုတ်ကုန် matrix ကိုစတင် တီထွင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Bytedance ၏အ ခမ ဲ့ ထုတ်ကုန် ဖြစ်သော ခရမ်းချဉ်သီး ဝတ္ထု သည်တရုတ် အခမဲ့ ဝတ္ထု ဈေးကွက်တွင် ထိပ်ဆုံး တွင်ရှိသည်။ အခမဲ့ ဝတ္ထု များသည် စာသား အပြည့်အစုံ ကို အခမဲ့ ပေး နေစဉ် ပန်ကာ ဝတ္ထု များစွာ အပေါ် မှီခို လေ့ ရှိသော်လည်း အမြတ်အစွန်း ရရှိရန် ကြော်ငြာ ကို မှီခို ရပြီး သုံးစွဲ သူ၏ စာဖတ် ခြင်း အတွေ့အကြုံ နှင့်မ ရင်းနှီး ပါ။ ၎င်းတို့တွင် ထိရောက်သော နှင့် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရာ များလည်း မရှိ နိုင်ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ ေပး အက္ ပလီ ေကး ရွင္း အသစ္မ်ား စတင္ မိတ္ဆက္ ျခင္းသည္
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Bytedance သည် အွန်လိုင်း ဝတ္ထု လုပ်ငန်းကို လောင်း ခြင်း၊ Mytopia အက် ပလီကေးရှင်း ကို ပြည်ပ တွင်စတင် ခြင်း
Bytedance သည် နိုင်ငံရပ်ခြား စာဖတ် ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဖွံ့ဖြိုး ဆဲဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြည်ပ ရှိ တရုတ် လူမျိုးများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
IResearch Consulting မှ ထုတ်ပြန်သော “တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေ ပြည်ပ ၂၀၂၀” အစီရင်ခံစာအရ တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေ ၏ ပြည်ပ သုံးစွဲသူ အရေအတွက်မှာ ၃၁. ၉ ၃၅ သန်း ရှိပြီး ပြည်ပ စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား မှာ ယွမ်သန်း ၄ ၆၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂. ၄ သန်း) ဖြစ်သည်။ ပြည်ပ စာဖတ် သူများ၏ ၉၁% ကျော် သည်တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေ များကို နေ့စဉ် နီးပါး အာရုံစိုက် ကြသည်။ ပျမ်းမျှ စာဖတ် ချိန်သည် ၁၁၇ မိနစ် ဖြစ်သည်။ ပြည်ပ သုံးစွဲ သူများ၏ ၈၇. ၁% သည်တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေ များအတွက် ငွေပေးချေ လို ကြသည်။